Aartiisit Hawwii Tazarraa: Aartiistoota Oromoo maaltuu Finfinneetti bal'inaan hojjachu daangeesse? - BBC News Afaan Oromoo
Aartiisit Hawwii Tazarraa: Aartiistoota Oromoo maaltuu Finfinneetti bal'inaan hojjachu daangeesse?
Madda suuraa, Hawwii Tazarraaa
Aartiistoonni Oroomoo akka saba warra biraa magaalaa Finfinnee bakkeewwan gurguddaatti akka hojiisaanii hindhiyeesiineef dandeettiin maallaqaa nuu daanggeesseera jechuun BBC'tti himte Artiisti Hawwii Tazarraa.
Aartiisitiin Oromoo beekamtuu Hawwiin, baandii muziiqaa isheetiin alattis sagantaa 'Badhaasa Siiqee' jedhuu eegaluudhaan dubartoota Oromoo karaa hedduudhaan seenaa Oromoo keessatti aarsaa kanfalaniif beekamtii kennuu eegaltee jirti.
Maaliif akka maqaa sagantaa kana akka filattee yoo himtuus, ''Siiqeen aadaa Oromoo keessatti mallattoo nageenyaafi kan eddoo olaanaa qabuudha. Dubartiin Siiqee qabattee baanaan waraana illeen qabanneessu dandeessi.'' jetti.
Kanaafuu, yaadni Badhaasa Siiqee kunis kan baroota dheeraaf na keessa tureedha kan jettu aartiisti Hawwiin, wallistoonni, ateeletoonni fi kanneen ogummaa Oromoo garaa garaa keessatti hirmaachuun artiifi aadaa akkasumas ummataaf waan guddaa hojjatanii fi aarsaa olaanaa kanfalan jiru jetti.
''Kanaaf jecha anis maqaa kanan moggaafadhee jetti'' artisit Hawwii Tazarraa.
Ka'umsa badhaasa Siiqee yoo ibsituus, yaaduma kanaaf jecha baatii sadiin dura Baandii Hawwii Tazarraa jedhuun hayyama baafachuun, badhaafamtoota damee xabatoota meeshaa shamarranii fi weellistoota shamarranii fi ateeleetoota kan hammateedha jetti.
Haa ta'u malee, akka warraa kaanii eenyuu yaa mo'atu jette adda baasuuf carraa dhabdulleen wellistootaa fi kanneen guddina aadaa fi aartii Oromootiif aarsaa olaanaa kanfalan galateenfachuudha kaayyoo guddaan badhaasa kanaa.
''Jireenyatti wal galateefachuu qabna. Oromoon sabaaf waan guddaa gumaatee tokko osoo lubbuun jiruu galateenfamu qaba jedheen sagantaa kana qopheessuu eegale,'' jetti Haawwiin.
Haaluma kanaanis sirna badhaasaa Muddee 30 bara 2018 Magaalaa Finfinnee Galma Aadaa Oromootti gaggeefameerratti atileetoota dubartoota Oromoo kana dura qabxii olaanaa galmeessuu maqaa biyyattii waamsiisa garuu amma eessa buuteen isaanii ummanni quba hinqabne, artiistoota dubartoota Oromoo, Doktoroota dubartii Oromoo fa'ii kan hammate ta'u himti.
Haaluma kanaanis ateeletoota shaniif beekamtiin kennameera. Isaanis Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaa, Geexee Waamii, Quxuree Dullachaa fi Biraanee Adaree waan Oromoo mataa ol qabachiisaniif badhaasni kun kennameefiira jetti, Hawwiin.
Akka Hawwiin jettuuttis, shamarreen Oromoo kunneen isaan aarsaa olaanaa kanfaluun seenaa hojatanii akka ofiitti boonnu nu taasisaniidha. Isaanis lubbuun jiraatanii kana arguun isaanii gammachu hunda caaluudhas jette jirtu.
Akkasumas Artisti Ilfinash Qannoo, Haalloo daawwii, fi Angaatuu Baalchaa gootoota dubartoota akka of barruuf aarsaa olaanaa taasisan yoo ta'an, Ababach Daraaraa amma kan lubbuun hinjirre ta'an illeen gumaati isaan taasisan kan bira hindabarreedha ture jetti Hawwiin.
Artisti Yashii Raggaasaa fi Ababachi Ajjamaa kanneen aartiidhaan bara dheeraaf aadaa Oromoo guddiisuu keessatti shoora olaanaa xabataniitu badhaasni kun keennameef, jeetti Hawwiin.
Artiistoonni Oromoo miseensa jarmiyaa kamiiyyu miti kan jettu Hawwiin, kan isaan lalaban ammmoo waa'ee miidhaa ummata Oromoo ta'u himti. Kanaafu, hawaasni Oromoo aartistoota bira dhaabbachuun isaan deegaruun guddina aartiifi dagaaginsa aadaa Oroomoo akkasumas fiixaan bahiinsa hawwii isaanii ni saffisa jetti.
Badhaasni Siiqee tokkooffan bara kana kaka'umsa dhuunfaa Hawwiitii eegalamee kunis, gootoota dubartoota Oromoo seektara kammiiyu irratti argaman garuu kanneen guddinaafi dagaagna aadaafi artiifi gumaatan akkasumas Oromoof waan gaarii hojjatan hunda hammatas jetti.
Dubartootn badhaasichaaf filataman kanneen waajjiraalee motummaa keessa hojjatan illeen ta'u mala kan jette Hawwiin, badhaasa kanas Finfinnee qofatti osoo erga baandii isheetiin Oromiyaarra naannooftee beeksiifteen booda, biyyoota ollaa biraatti illeen raawwachuuf karoora akka qabdu himtii.
Aartiiftoonni Oromoo akka aartiiftoota saba birootti maagaalaa Finfinnee keessatti hojjachuuf dandeettiin maallaqaa isaanii hinheemuuf kan jettu hawwiin, haalli kunis akka hojiiwwan aartii isaanii bakkeewwan gurguddaatti akka hinhojjaneef daangaa itti umuusaa himti.
''Anillee galma barkumeetti hojjachuuf yaaleen ture. Garuu hinmilkoofne. Garuu Waaqni jedhee wantoota abdii nama kutachiisan hedduu keessatti milkaa'eera'' jetti.
Osoo walhammachuu, waldhungachuufi qaqqabuun hafee fayyaa keenyarraa maaltu hanqata?
Arseenaal dorgommii FA Cup'n ala yoo ta'u, Maanchistar Yunaayitiid fi Liivapuul har'a morkatu
Kilabichatti 'nama biraatu murtoo jijjiirraa taphattootaa dabarsaa jira' - Kiloop
Qopheessaan sagantaa TV buleessi Laarii Kiing boqote